Izibikezelo Zokuqukethwe Zika-2012 ezivela Kuzazi | Martech Zone
Izibikezelo Zokuqukethwe Zika-2012 ezivela Kuzazi
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 30, i-2011 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 30, i-2011 Douglas Karr
UJoe Pulizzi hlanganisa uhlu oluningi lwezibikezelo zokuqukethwe ze- I-Content Marketing Institute kusuka kubanikeli abacishe babe ngama-80! Angiyena umuntu othanda kakhulu Ukubikezela, imvamisa abantu cishe ngaso sonke isikhathi bayiphutha… kungakhathalekile ukuthi banezikhundla nobani. Ngithathe kancane indlela ehlekisayo ngokunikela kwami… kepha uJoe wayithanda futhi wayisho njengenye ye top 15!
Inkinobho entsha ingezwe kumasayithi wokuxhumana nomphakathi… The Inkinobho “Shut Up” kuma-troll athule nabantu abangangezi inani engxoxweni. Kulungile, mhlawumbe akusona isibikezelo, nje isifiso.
Kukho konke ukwethembeka, kepha kubonakala sengathi kuba nzima nsuku zonke ukungena ngomsindo futhi uthole inani kumasayithi amakhulu aneminikelo eminingi evela kubantu abaningi. I-Twitter, i-Facebook ne-LinkedIn sezigcwele ugaxekile nezingxoxo ezingasho lutho… i-Google + isendleleni. Ngikholelwa ngobuqotho ukuthi sidinga ama-algorithms angavele amane nje khangisa okuthandwayo, kodwa nalokho futhi thulisa ama-troll.
Tags: Ukukhangisa OkuqukethweI-Content Marketing InstituteUJoe Pulizzi
Ubungozi Bemihlambi Nezizwe
Dec 31, 2011 ku-11: 01 AM
UDoug, ukufakwa kwenkinombo ethi "vala" kuzoba yinguquko. Njengoba ipulatifomu yokuxhumana nabantu ithandwa kakhulu, ikhwalithi yokuqukethwe iyahlanjululwa. Kusuka ku-Usenet kuya ku-Twitter, wonke amapulatifomu angahlosiwe ahlupheke ngokufana nse.
Njengokuphikisana nomphakathi njengoba kuzwakala, ukhiye emphakathini okhulayo we-inthanethi ukuphawula ngamazwana.
Dec 31, 2011 ngo-10: 15 PM
Ngicabanga ukuthi uqinisile impela, Tim! Noma nini lapho ngibona isiza esine-SPAM emazwini aso, angikhathazi ngisho nokuphawula ngoba kubonakala sengathi abanandaba nokuthi ubani ophawula.